Tarikhda Maysooniyada Qaybta 3aad - Land Of Punt
Tarikhda Maysooniyada Qaybta 3aad
Gacansaarkii ScotlandIlaaliyashi Masjid Suleiman “The Knights Templars” waxay usoo kicitimeen dhinaca Scotland waxayna magangalyo siyaasaded iyo inaan diimahooda lafaragalin way diisteenten hogaamiye Robert the Bruce oo markaa xaalad dagaal kulajiray Ingriiska. Waxay dareemen in meel xun lalamarayo Robert waxaana usoo baxday fursad ay iskaga dhaadhicin lahaayen Robert iyo inay soo bandhigi karaan farsamooyinka dagaal ee ay yaqaanan ilaaliyaasha masjidka Suleiman. Waxay hogaamiye Robert usoo jeediyeen inay ka barbar dagaalaman Scottishka oo hadii ay waliba ka guuleystan cidamada ingiriiska oo ay jabiyaan in heshiis buuxda lasiiyo.
Robert the Bruce wuu aqbalay soojedin nimanka bari guntii ka yimi waxayna kala saxeexden heshiis dhamaystiran. Robert the Bruce, awalba kaymaha Scotland ayuu ku dhumaalaysanayey oo arinkiisu ahaa ku dhufoo ka dhaqaa ku waday cidamadii boqortooyada ingriiska ee ka awooda badnayn. Meesha waxba kumuu hayn markaa niman leh anakaa jabinayna ingriiska magangalyo uun nasii muxuu ku diidi. Lakinse, tarikhdu kama tagto yaabka ku yimi Scotishka markii nimankanu soo jediyeen inay jabin doonan ingriiska iyagoon tiradoodu gaadhayn 1000 boqol nin. Robert wuxuu u arkayey inay dhimashadoodi ku sii socdaan. Warbaa waa danbeeyaye, codsi taagna oo lagu dalbanayey scotishka inay mar uun sida raga baananka usoobaxan oo ingriis dalbanayey oo lagu carinayey inay kaymaha kasoo baxaan ayaa rumoobay.
Ilaaliyashi masjidka Suleiman waxay ku wargaliyeen Robert The Bruce inuu ka jawaabo codsiga boqorada oo wakhti labada ciidan isku haleelayaan sooqato.Dagaal kaba danbaysa oo shul ama shul ah oo tarikhdu xusidoon ayuu Robert ku baaqay oo ingriiski aanu waligii dagaal fool ka fool ah ugu bixin iskeen siiya yidhi, ileyn waa nin balaayo dabasocotaa eh. Waa laysu habarwacday waxaana lagu balamay goob banana oo layidhaah “Ballack Burn”. Ingiriisku inuu guulaysanaayo shaki kama jirin guushuna way umuuqatay. Dhinaca Scottishka laftarkooda oo awalba inay isdhiiban inyar ujiray mar kamadanbaysa oo shul ama shul buu arinkoodu ahaa, waxay kaloo ku xisaabtamayeen nimanka halaaga ah ee tababaran ee ilaa 200 sano dagaal kusoo jiray ayey laftarkoodu guul ka dhex arkeen. Ciidamada ingiriiska ee goobta Ballack Burn yimi waxaa lagu sheega 25 kun oo askari halka scotishka 6 kun waliba waa marka lagu daro cidamada ilaaliyasha masjid Suleiman.
25000kii kun ee reer ingriisk subax kaliya ayaa lagu quraacday, xataa askari kaliyi kama badbaadin dhamaan waa lalaayey. Scotland xoriyadeedii ayey heshay Robertna boqor ayuu noqday, ilaaliyashi masjidka Suleiman xor iyo xarago ayey iyana ku dageen Scotland.Ilaalayaashi Masjidka Suleymaan, ileyn niman nabad galyo dunida ku joogaya ma ahee faalkii iyo khuraafadkii ayaa tusay inay mideeyan Scotishka iyo Ingriiska (Scotland iyo England) oo meel isugukeenan. Wayna ku guuleysteen inay midyeen labadii dhinac ee waligood dagaalamayey meel fogna kamay dayin arinkee boqoradii ingiriis iyo boqorkii Scottish oo iyaga ah ayey isu guuriyeen waxaana lagu dhawaaqay dal cusub iyo boqortoyo “Great Britain”.
Ilaaliysahi masjid Suleiman ayaa dusha ka wata arinka oo labadaba dhinacba oo daaha dabadiisa ugu jira. Magaca cusub ee looyaqaan ilaaliyashi masjidka Suleiman waxay ubadasheen walaalihi maysooniyada “Masonic Brothers”. Wixii danbeeya taarikhda la mideeyey Scotland iyo England jasiirada looyaqaan Great Britain waxaa yeeshay walaalaha maysooniyada. 1603 Ciise dabadii “AD” ayaa jaanis fiican usoobaxay. Boqoradadii Ingiriiska Elizabeth I ayaa dhimatay kursigeedina wuu banaanaaday waxaana lasoo oo isla walaalihi maysooniyda soojediyeen Boqor “James V of Scotland” oo ahaa xertooda isku dhaxlo kursigii Boqortooyada Ingiriiska iyo kii Scotishkaba. Wakhti dheer ayey isqarinayeen ilaaliyashi Masjidka Suleiman ilaa laga iloobay ciday ahaayeenba oo magaca maysooniyadu hirgalay waxna ay ku maamulayeen. Boqolkaa sano ayey xadhko isku xidhxidhanayeen oo dib isu abaabulayen, mansabyadii boqortooyadana isku taxeen.
Shikhsigii ugu horeeyey ee la odhankaro toos buu mabaadida ururkan uqaatay ee kasocday dhinaca ingiriiska wuxuu ahaa “Fredrick Prince of Wales”. Wacad waxay kumareen inay soo aargudan doonan oo hantidoodi faraha badanayd ee Boqor Philip iyo baadariga Cleament V ka qaaden soo ceshendoonan..Bal aynu siday Yurubta kalena uga dhextoosen eegno.
Taarikhda Maysooniyad Qaybta 2aad